GABGABLAYNTA WASIIR XIRSI WAXAY CADAYNAYSAA JAAHILNIMADIISA GAAMURTAY | Salaan Media
GABGABLAYNTA WASIIR XIRSI WAXAY CADAYNAYSAA JAAHILNIMADIISA GAAMURTAY
September 6, 2013 | Published by: Hamse
Ma jirto jaahilnimo ka liidata inaanu qofku garaynayn kaalintiisa shaqo gaar ahaan markuu xil qaran hayo. Aduunkana mar kasta oo qof shaqo loo dhiibo waxaa si qayaxan loogu cadeeyaa doorkiisa iyo masuuliyadiisa si uu toos hawshiisa uugu qabto waajibkiisana uuga soo baxo.
Masuul meel kasta gacan togaaleeya oo garab ku daaqa iyo leex leexa yaqaana sida dukhsigana xeedho walba ku dhacaa waa waxa Somalida halkaas dhigay iyo calaamadaha musuq maasuqa iyo qayrul masuulnimada lagu yaqaano
Bal u fiirsada tamactamacda iyo boodh isku qarinta wasiirka madaxtooyada Somaliland ku kacay ka dib markii todobaadkan looga yeedhay golaha baarlamaanka si su`aalo loo waydiiyo.
Wasiirku wuxuu u hadlay sidii uu dalka madaxweyne, madaxweyne ku xigeen ama raysal wasaare ka yahay waayo dhamaan qaybihii dawlada oo dhan iyo laamaheedii ayuu ka war bixiyey ayadoon la waydiin waxaanad moodaysay inuu wasiirku olole doorasho ku jiro.
Iska daa shaqadiisa wasiirnimo ee xataa sababta baarlamaanku uugu yeedhay iyo macluumaaadka ay ka rabaan muu fahmin ilaa imika wasiirku, waxa keliya ee maskaxdiisa ku jiraana waa adeerkaa Siilaanyo difaac waayo wuxuu aaminsan yahay inuu asaga dukaan uu leeyahy uu uuga shaqeeyo ee ma aaminsana mana oga in madaxweynuhu uu u igmaday farac qudha oo ka mid ah hawlaha qaranka kaas oo weliba ku kooban inuu qasriga madaxtooyada maamulkiisa maalinlaha ah iyo hawlaheeda kala wado oo keliya.
Hadalka dheer ee waqti lumiska ah ee uu Xirsi kaga gabanaayey su`aalaha mudanayaashu waa kalaam faaruq iyo hadal meel waayey sababtoo ah macluumaad iyo xogo qof kastaa heli karo golayaasha qarankuna warkooda ka dheregsan yihiin haday u baahdaana ay masuuliyiinta qaranka uugu xil saaran ka waraysan karaan ayuu meesha ka jeediyey kuna meeraystay si uu caamada isaga dhaadhiciyo uuna tuso inuu yahay nin belaayo ka dhacday oo wax kasta oo dalka ka socda og.
Tusaale ahaan, inta dufcadood ee booliska la tababaray iyo inta saldhig ee ay dalka ku leeyihiin iyo dhamaan wixii kale ee arimahooda ku tacaluqa waxay baarlamaanku ka waraysanayaan markay u baahdaan horena uuga wraysteen wasiirka arimaha gudaha iyo janaraalka booliska.
Miisaaniyada qaranka, waxbarashada, tacliinta, ciidanka qaranka iyo dhamaan meelaha aan loo diran ee Xirsi ka warbixinaayeyna waxay leeyihiin masuuliyiin iyo wasaarado ta uu asagu hayo ka weyn kana shaqo badan iyo madax ka masuul ah oo wax laga waydiiyo.
Ogoow wasiiro iyo madax kale oo fara badan ayay in badan golayaasha qaranku u yeedheen kuwaas oo dhamaantood Xirsi ka aqoon iyo waayo aragnimo badan mid keliya oo ka mid ahina war bixin la mood sidan u balaadhan meesha ma keenin? Waayo? Sababtoo ah shaqadooda iyo waxa goluhu uuga fadhiyo ayay labadaba garanayaan sidaas darteed ayaanay soohdinta arintani leedahay aanay marna uuga bixin.
Hadaba hab dhaqanka wasiir Xirsi ee dhacdadani miyaanay cadaynayn inaanu wasiirku madax iyo mijo kala lahayn wixiisuna qardo jeex yihiin iyo iska dhaadhicin indho iyo dhego la?
Waxaan qoraalkaygan kooban ku soo af jarayaa laba fariimood oo aan midna baarlamaanka u diraayo midna Wasiir Xirsi laftiisa
Baarlamaanka gaar ahaan shir gudoonka waxaan leeyahay, markaa cid masuul ah waraysanaysaan ama wax su`aalaysaan waa inaa idinku mawduuca laga hadlaayo gacanta ku haysaan waqtigana maamushaan, waayo hadii kale qofkii aa meesha keenteen ayaa idinku dul soconaaya xogtaa uuga baahnaydeena kama helaysaan, Fadlan eega sida golayaasha aduunku arimahan oo kale u maamulaan.
Anigoo qaderinaaya madaxnimadiina iyo dadkii idin doortayba isla markaas aan jeclayn inaan shaqadiina idiin tilmaamo ayay hadana igu kaliftay inaan kelmed nasteexo ah halkan idiinku soo qoro waraysigiinii wasiir Xisi darteed.
Wasiir Xirsina waxaan leeyahay ` Wasiir shaqadaada ku koobnoow oo gaadhigan hoonka iyo bireega toona aan lahayn ee aad suuqa eryaysid fadlan naga jooji! Milgaha dawladnimadana meel ha kaga dhicin oo wax kasta oo aan shaqadaada ahayn ha dhex batalaqsan`